BREAKING NEWS:DIINQA OROMOO: Fiilmii Wayyaanee No.I- Akkuman kana dura TAAJJABBIIN addeessee turetti, kunoo miidiyaa fakkeessaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBREAKING NEWS:DIINQA OROMOO: Fiilmii Wayyaanee No.I- Akkuman kana dura TAAJJABBIIN addeessee turetti, kunoo miidiyaa fakkeessaa
BREAKING NEWS:DIINQA OROMOO: Fiilmii Wayyaanee No.I- Akkuman kana dura TAAJJABBIIN addeessee turetti, kunoo miidiyaa fakkeessaa
BREAKING NEWS: DIINQA OROMOO: Fiilmii Wayyaanee No.I- Akkuman kana dura TAAJJABBIIN addeessee turetti, kunoo miidiyaa fakkeessaa kana Wayyaaneen har’a gadi lakkisteetti. Oromootu Somaalee qale jechuudhaan No.1 baafatteetti. Kunoo egaa diraamaa akka kanaan waggaa 27 Oromoofi saba biroo walitti diruun jiraatan. Ammuma yeroo sabni keenya haqasaa beekee jiru kanatti yeroo waan akkasii kana dalagan guddaa nama aarsa. ISumaammoo, OPDO diina gochuu isaaniiti. Kun XAWALWWAALLUMMAA SIYAASAATI…Kashalabboota kana…!!
Page : Salaalee Tube ji’a sadaasaa keessa barreeffama gadii maxxansee ture. Beekaaf wal’aalaan arrabaan xab godhee lafa kaa’e gaafas. Dhugaan inni gaafas dubbate har’as dhugaadha. Dubbisaa!
Garboota Wayyaanee OPDO Kana Hirribaa Dammaksuun Qabsoo Saba Oromootti Makuuf OPDO Ta’uun Garaagara
√Salaalee Tube, sadaasa,4,2017
TPLF erga jaarmiyaa EPLF keessatti of bokoksuun aangoof jomomii qabdee kaatee, waan uummata Oromoo fayyadu kamuu dalagdee akka hinbeekne hubatamaadha. Keessattuu erga mootummaa ce’umsaa gara aangoo mataasheetti deeffattee kaatee, abuurrattee adda bilisummaa Oromoo balleessuuf waan hingoone hinqabdu. Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba kaayyoo mataasaaf akeeka qabsoo ganamaa sana itti cichee qabate jiru, miseensota kaayyoo isaa guutummaatti fudhataniin kan adeemaa jiru ta’uun wal nama hingaafachiisu. Kanaaf dhaabni guddaan impaayera Ethiopia jedhamtu keessatti Tigiroota yaaddessu jabaan ABO ta’uu isheenis beekti.
Wayyaaneen har’a cinii hurgufattee akka baragdu kan godhe, shiroota isheen xaxxu irratti dammaquu dhabuu keenya akka ta’e beekaamaadha. Isa kanaaf ammas xaxaa siyyaasaa Wayyaanee keessa utuu hingalin waan wal hubachiisnu wal hubachiisuun barbaachiisadha. Adeemsi Wayyaanee uummata Oromoo waggaa 26f garboonfattee inni duraa OPDO dha. OPDO geejiba wayyaaneeti. Akkasuma harroota ba’aa garaagaraa baataniif taasiftee itti gargaaramti. Dhalli namaa Harree hamma humna qabdu qofatti itti gargaarama. Wayyaanneenis akkasuma, hamma isaan hojjetaniifitti, hojjechiifatte gaafa dulloomaanii ykn dalagaa dhaaban gadi gatti. Arcaatota waraana darguu irraa haftee Wayyaanee jalatti walitti qabamte kun, kaayyoon isaanii lubbuu ofii jiraachisuudha. Akkasuma qaama du’a irraa isaan hanbise waaqeffachuudha. Gooftaan OPDO kanaaf yeroo kamuu Wayyaaneedha.
Wayyaanee hededa hallayyaa geessee baroota dheeraaf du’arraa baraaramuu dandeessee jirti. Kunis adeemsa luqqaafata bineensaan wal fakkaata. Bofti ykn bineensi lafa yaa’u adeemsa guddinaa keessatti qaama moofaa daggala keessatti ofirraa gatee haaromaa bula. Guutummaa qaaama isaa ofirraa folloqsuun bofaa Luqqaafata jedhama. Wayyaaneenis akkasuma gaafa siyyaasni ishee dulloomu daara ofbaafti. Of luqqiftee du’arraa baraaramaa yoona geesse. Daandii lubbuun jireenyaa kan ta’eef waggoottan kana Mara OPDO dha. Gartuun OPDO muraasaarraan kan hafe naatoo dhala namaa hinqaban. Waa’ee Oromummaa hinbeekani. Gariin isaanii garuu jajjaboodha. Amma kan adeemnuuf caasaa OPDO Mara abaaruuf jibbuuf miti. Warra Wayyaanee faana hariiroo uumee du’aaf nu saaxilaa jiru wal hubachiisuudha.
Bilisummaa har’a dharraanuuf Bilisummaa har’a gidiraa meeqa argaa jirruuf lubbuun nama danuu itti darbaa yoona gahe. Qabsaa’onni kaleessaa, bu’ureessitoonni ABO ilmaan haqaa shiftoota sumaaleen Shinigaatti Oromummaan lubbuu isaanii aarsaa baasuun bilisummaa fi walabummaa Biyya abbaa keenya Oromiyaa mirkaneessufi. Oromiyaa biyyoota Afrikaa keessaa tokko taasifnee gaanfa afrikaatti biyya guddoo ijaaruun har’as Hawwii keenya. Qabsoon itti jirrus akkana. Malee, qabsoo warra gumaa faana buddeen cidhaa nyaachuu miti. Warri guma hanga gumaa hinkaffalletti, ykn keessaa hanga hinajjeefannetti gumaan gumaa dhuma. Ilmaan Oromoo waggaa 3 asitti 4000 ol lubbuun darban Ethiopia faarsaa du’an utuu hintaane, Oromiyaaf Oromiyaa faarsaa lubbuun darban.
Qabsoon Oromoo lubbuu jaallan qaqqaalii nu dhabsiise akka nu dhabsiisuus kan taasise gartuu OPDO ta’uu yoomuu dagatuu hinqabnu. Har’a laagaa ciratanii sabboonaa fakkaachuun fafa dubbiiti. Madaan keenya aanolee, calanqoo sun har’as hinqoorre. Madaan keenya madaa qaama namaati, madaa saree taasisanii arrabaan madaa nu qoorsuuf yaaluun waandabaatii.
Qabsoon keenya OPDO gototee nutti fidaa jira. Harka laachuuf mamii irra waan jiraniif, Qabsoo fidne jedhanii dalaguullee malu. Kun fafa dubbiiti. Har’a gaafa waa’ee OPDO kaafnu Tokkummaa sabaa diigne miti. Tokkummaan sabaa ammayyuu achuma. Warri Tokkummaa diigu, warra kaayyoo sabaa harkaa hunkuruu hedudha. Har’a gaafa waa’een ayyalaallattootaa kaafamu, saba Oromoo gidduutti akka kaafametti fudhachuun dogongora.
Isaantu tokkummaa saba gaafa bittimsuuf ka’an argaa jirra. Tokkummaa kana jabeeffachuuf ammoo diina keenya Wayyaaneef OPDO yoomuu amanuu hinqabnu. Garboota Wayyaanee OPDO Kana Hirribaa Dammaksuun Qabsoo Saba Oromootti Makuuf OPDO Ta’uun Garaagara. OPDO dammaksuuf dirqama isaan ta’uun hinfeesisu. OPDO qabsootti makuun waan isaan jedhan hojiirra oolchuun utuu hintaane, waan qabsaa’onni jedhan isaan hojiirra oolchuun ta’uu qaba.
Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti